September | 2016 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Racist Criminal Thidagu had insulted the Islamic world and Rohingyas again
September 30, 2016 April 3, 2017 drkokogyi
Racist Criminal Thidagu had insulted the Islamic world and Rohingyas again.
So it is obvious that Buddhism fail to destroy the religions already present in those countries. Why did Thidagu try to put the blame on Islam now? Just spreading HATE SPEECHES against Islam.
Mixed blooded people of Myanmar ပထမဆုံးသွေးနှော ခြင်းကိစ္စ စခဲ့တာက အနော်ရထာ ပဲ
September 30, 2016 drkokogyi
Now only I had seenalot of Tine Yin Thar Rawans…most of them have obvious Indian (northern) or Nepalese features and all their names sound like Indian names e.g. Khan …even with Indian god’s name Ram. But they are Christians thanks to Colonial Masters. And they are staying near Hukaun Taunggar (valley) connecting the India and China. And I heard that even India had once tried to claim that area as theirs.
ပထမဆုံးသွေးနှော ခြင်းကိစ္စ စခဲ့တာက အနော်ရထာ ပဲ
ကျန်စစ်သား က သက်သေပေါ့
“ကုလားသွေးနှောအစ အနော်ရထာ က” လို့ တောင် စကားပုံထားရလိမ့်မယ်
ဗျတ်ဝိဗျတ္တ ဘိုင်ဆပ်တို့ကတော့ မပြောတော့ပါဖူး
ထိုင်းကိုတိုက်ရင်း နိုင်လို့ခေါ်လာတဲ့ အနုပညာရှင်တွေက နေ ထိုင်း(သျှမ်း)သွေးက နှောပြန်ရော
အဲ့နောက်တော့ ပေါက်ဖော်ကြီး က တစက်နှစ်စက် နရသီဟပတေ့ ဆီ လာရောတယ်
အဲ့ချိန် မြောက်ဦးမှာက ဘင်္ဂလားသွေး တဂါလံလောက်ရောနေလို့ ဘုရင်တွေတောင် ကုလားနာမည်တွေဘွဲ့ တွေ ယူနေကြချိန်ပေါ့ သူရို့မျိုးဆက်ကို စစ်နိုင်ပီး မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး ဒီဘက်ပင့်လာတော့ အဲ့သွေးတွေ ပါလာတာမှ တပျစ်တခဲ ….လေးသည်တော်သွေး သက်တော်စောင့်သွေး စသဖြင့်ပေါ့……
DIALOGUE WITH A SHAN LEADER, H.R.H HSO KHAN PHA
September 29, 2016 September 29, 2016 drkokogyi
Note: I have contributed this paragraph in Wikipedia asareference.
Recently, I gotachance to talk to the leader ofaShan Group campaigning foratotally Independent Shan State. His name is Tiger Yawnghwe or His Royal Highness Prince Hso Khan Pha; he is the eldest son of Sao Shwe Thaik, the former Saopha[Prince] of Yawnghwe[Nyaung-Shwe] and the first President of Burma after Burma’s Independence from British colonial rule.
In the following excerpts I’ll refer him as ‘Sao Hso’, and me ‘Tayza’.
Christian organisation calls for halt to plans to demolish mosques
September 29, 2016 drkokogyi
By Mizzima On Wednesday, 28 September 2016
A Muslim boy sits in front of the local mosque in the Aung Mingalar quarter in Sittwe, western Myanmar. Photo: Nyein Chan Naing/EPA
ရခိုင်မှ ဗလီများ ဖျက်သိမ်းမည့် အစီအစဉ် ရပ်တန့်ဖို့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခရစ်ယာန် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ တောင်းဆို
စက်တင်ဘာ ၂၈ ၊ ၂၀၁၆
စက်တင်ဘာ ၂၇ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခရစ်ယာန်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (CSW) ၏ ကြေ ညာချက်တွင် တရားမ၀င် ဆောက်လုပ်ထားသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ ၀တ်ပြုနေသော ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံပေါင်းအပါအဝင် အဆောက်အအုံ သုံးထောင်ခန့်အား ဖျက်သိမ်းမည့် အစီစဉ်များကို ရပ်တန့်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။ ယင်း အစီစဉ်တွင် မွတ်စလင်အများစု နေထိုင်ရာ မောင်းတောနှင့် ဘူးသီးတောင်ခရိုင်များမှ ဗလီ ၁၂ လုံးနှင့် ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်း ၃၅ ခု တို့လည်း အပါဝင်ဖြစ်သည်။
ယင်း ဖျက်သိမ်းမည့် အမိန့်ကို ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်စပ်ရေးရာနှင့် လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဖြစ်သော ဗိုလ်မှူးကြီး ထိန်လင်းမှ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မောင်းတော ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးရဲထွဋ်မှ ထပ်မံအတည်ပြု ပြော ကြားခဲ့ပါသည်။ သို့သော် မြန်မာတိုင်းမှ သတင်းပေးပို့ရာ၌ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင်မူ ဗိုလ်မှူးကြီးထိန်လင်းက ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အနေဖြင့် မောင်းတောတွင်ရှိနေသည့် ဘာသာရေး အဆောက်အုံများကိုသာ တရားဝင်ဆောက်ထားခြင်း ဟုတ်/မဟုတ်ကိုသာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု့ ပြုလုပ်ရန်သာ အစီစဉ်ရှိပြီး ဖြိုချဖျက်ဆီးမှု့ကိုတော့ မစတင်ရသေးကြောင်း ပြန်လည် ဖြေရှင်းခဲ့ပါသည်။
ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်အုပ်စုများ၏ စက်တင်ဘာလ ၂၃ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်သော ပူးတွဲကြေညာချက် တစ် စောင်တွင် အဆိုပါအစီစဉ်မှာ ” ရိုဟင်ဂျာအသိုင်းအ၀ိုင်း တစ်ခုလုံးအတွက် အံ့သြတုန်လှုပ်စရာ ဖြစ်ခဲ့ရသည်” ဟု ဖေါ်ပြ ထားပြီး ယင်းသို့ ဘာသာရေး အဆောက်အုံများအား ဖြိုချဖျက်ဆီးပစ်မည့် အစီစဉ်မှာ အကာကွယ်မဲ့နေသော ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရန် နှင့် လူမျိုးတုန်းသန့်စင်ရန်အတွက်သာ စနစ်တကျရေးဆွဲထားသော သူတို့ (ရခိုင်အစိုး ရ၏) ရေရှည်စီမံကိန်းများထဲမှ တစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟု ထပ်မံဖေါ်ပြထားပါသည်။
ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ၀တ္တိက သာသနနယ်မြေရှိ အဆောက်အအုံများကို အကာကွယ်ပေးရန်နှင့် ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် နှင့် လွတ်လပ်စွာယုံကြည်မှု့ကို မြှင်တင်ရန် အတွက် ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများကို ဖြိုချဖျက်ဆီးပစ်မည့် အစီစဉ်များ ကို ရပ်တန့်ရန် အဆိုပါကြေညာချက်က တိုက်တွန်းထားသည်။ ဒေသတွင်း ပြောင်းရွေ့နေရာချခံထားရသော သူများ၏ နေအိမ်များကို နဂိုအတိုင်း ပြန်လည်နေရာချထားပေးရန်၊ သူတို့၏ သိမ်းဆည်းခံလိုက်ရသော ဥစ္စာပစ္စည်းများကို မူလပိုင် ရှင်ထံသို့ လက်ရောက်ပြန်လည်ပေးအပ်ရန်နှင့် အကူညီပေး၍မရအောင် ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ထားမှု့များအား ဖယ်ရှားပစ်ခြင်း ဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင် အသိုင်းဝိုင်း၏ အခြေခံရပိုင်ခွင့် အခွင့်ရေးများကို ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် အခြားကျန်ရှိသည့် ကြေညာချက်တွင် အခုလိုဖေါ်ပြထားပါသည်။
မြန်မာပြည်မှ ရိုဟင်ဂျာများမှာ ၂၀၁၅-ခုနှစ်က ကျင်းပသည့် မြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲတွင် သူတို့၏ မဲပေးသည့် အခွင့် ရေးများကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး မကြာသေးခင်ကမှ ကောက်ယူခဲ့သော ပြည်လုံးကျွတ်သန်းခေါင်စာရင်းတွင်လည်း ချန်လှပ် ထားခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့်အပြင်၊ နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်ကိုလည်း ဆက်လက် ငြင်းဆန်ခံရနေဆဲဖြစ်သည်။ မေလ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်ရေးကောင်စီသို့ ပေးပို့ခဲ့သော ကြေညာချက်၌ CSW က မြန်မာအစိုးရအား ၁၉၈၂ မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့နှင့် ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်မှု့ကို အားလုံးတို့အား အာမခံ ချက်ပေးဖို့ ဖေါ်ပြထားသည်။
မကြာသေးခင်နှစ်များအတွင်း ရိုဟင်ဂျာတို့အပေါ်တွင် လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ ချိုးဖေါက်မှု့များ၊ အလွဲသုံးစားလုပ်မှု့များ၊ ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်မှု့များ၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု့များနှင့် အကြမ်းဖက်မှု့များမှာ သိသိသာသာ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်။ ခန့်မှန်း ခြေ လူပေါင်း တစ်သိန်းခွဲခန့်မျှ ပြောင်းရွေ့နေရာချထားခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဆိုးဝါးဆုံး အခြေနေတစ်ချို့ ရှိနေ သည်ဟု ကုလသမ္မဂ္ဂအရာရှိငယ်တစ်ချို့က ပြောကြားထားသည့် ယာယီစခန်းအတွင်းမှာသာ သူတို့ နေကြရလေသည်။ ရိုဟင်ဂျာ လူဦးရေ၏ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်မျှရှိသော၊ လူပေါင်း တစ်သိန်းကျော်ခန့်မှာလည်း ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်မှု့များနှင့် ရင် ဆိုင်ခံခဲ့ရခြင်းကြောင့် တိုင်းပြည်တွင်းမှ စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပြီး သူတို့အနက်မှ ထောင်ပေါင်းများစွာမှာ လှေဖြင့် ထွက်ပြေး သွားစဉ်ကာလအတွင်း ပင်လယ်ထဲတွင် နစ်မြုပ်ခဲ့ကြရသည်။
” ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းက ဗလီတွေနဲ့ ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်မဲ့အကြံစည်တွေကို ကျွန်တော်တို့ အတော်လေးကို စိုးရိမ်ပူပန်မိပြီး မြန်မာအစိုးရကို ဒီလုပ်ရပ်တွေကနေ ရပ်တန်းကရပ်ပစ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ တိုက်တွန်းပြော ကြားလိုပါတယ်။ ယင်းအဆောက်အအုံတွေကို ဖြိုချဖျက်ဆီးလိုက်ခြင်းက တိုင်းပြည်အတွင်းမှာ နောက်ထပ် ဆူပူအုံကြွမှု့ တွေကိုသာ ဆွပေးရာရောက်စေပြီး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပထုတ်ဖယ်ကြဉ်ခံထားရလို့ လူမဆန်အောင် နှိပ်ကွပ်ခံထားရတဲ့ လူတစ် စုကို လူမျိုးတုန်းသုတ်သင်ဖို့အတွက် လောင်စာပစ်ထည့်လိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့က ဘာသာရေးလွတ်လပ် ခွင့်(ဒါမှမဟုတ်) အားလုံးနှင့်ဆိုင်တဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်ကို မြှင့်တင်ပေးရန်နဲ့ အကာကွယ်ပေးရန်အတွက် မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအ၀င် ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက ဒေသအချို့တို့မှာ လူသားချင်းစာနာတဲ့ အကူညီတွေ ပေးအပ်နေမှု့တို့ကို တားဆီးနေတာတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့နဲ့ ပဋိပက္ခ ကြောင့် ပြောင်းရွေ့လာရတဲ့ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့နေသူတွေကို သူတို့ အမှန်တကယ်အရေးတကြီး လိုအပ်နေတဲ့ လူသား ချင်း စာနာထောက်ထားတဲ့ အကူညီတွေကို လက်ခံလာနိုင်တဲ့အထိ စိတ်ချယုံကြည်မှု့ရှိအောင်လို့ ကျွန်ုပ်တို့က အစိုးရကို တိုက် တွန်းအပ်ပါတယ်။ ” ဟု CSW ၏ အလုပ်အမှု့ဆောင်ချုပ်အဖွဲ့ အကြီးအကဲဖြစ်သူ မာဗင် သောမတ်စ် (Mervyn Thomas ) က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Mizzima English News တွင် ပါရှိသည့် Christian organisation calls for halt to plans to demolish mosques ကိုဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။
ဒီတိုင်း ဒီပြေ မယ် မင်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဖြစ်နေခြင်းက ပြဿ ….နာ တခု ဆိုတာ မင်းနားလည်သွားရင် ကျေနပ်ပါပြီလေ
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံကို မင်းစိတ်ကြိုက် ရိုင်းပျ
သေပါစေ ဘာညာ စော်ကားလို့ ရတယ် …
မင်းကို မဖမ်းပါဘူး … ဆိုက်ဘာပလိပ်ကလည်း
မမြင်သလို လုပ်နေမှာ …
ဒါပေမယ့် မင်းက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တော့ ဖြစ်မနေရဘူး …။
Is thataplot ordered by Sr Gen Than Shwe to execute by Min Aung Hlaing to double cheat Myanmar Muslims and to ignite another anti-Muslim riots so that Myanmar Military could ‘save’ Myanmar again by performingaCoup
Is thataplot ordered by Sr Gen Than Shwe to execute by Min Aung Hlaing to double cheat Myanmar Muslims and at the same time ordered its Military lap-dog (Sit Khwes) Ma Ba Tha Monks to attack Muslims to createaproblem (bad image) for DASSK led NLD and if possible ignite another anti-Muslim riots so that Myanmar Military could ‘save’ Myanmar again by performingaCoup.